တောင်များ၊ ကုန်းပြေမြင့်များ | JAPAN DISCOVERY
မူလနရော » တောင်များ၊ ကုန်းပြေမြင့်များ
Updated: 2016-11-20 01:02
ဟိဇန်း လေ့လာရေး အဖွဲ့ ရဲ့ မြို့ လေး အဖြစ် ၊ တောင် တစ် လုံး တည်း ကို ဘုန်းတော် ကြီး အပါး ၅၀၀ လောက် တော ၀င်တရား ကျင့် ဖူး တဲ့ တောင် ဖြစ် ပါတယ်။ ၄င်းတောင် ဟာ နိုင် ငံ ရဲ့ သမိုင်း ၀င် စာရင်း ၀င် ဖြစ် ပါတယ...
သဘာဝရှုခင်း သတင်းအချက်အလက်များတောင်များ၊ ကုန်းပြေမြင့်များ
Updated: 2016-10-06 16:49
ကိုးမဲ ဂျိက တောင်
အာစိုး တောင် သို့ အသွား လမ်း အတွင်း တောင်တက်လမ်းလေး ကို လှမ်း တက် လိုက် ပြီ ဆို သည်နှင့် ရှုတ် တရက် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ တောင်လေး တစ်ခု ကို တွေ့မြင် ရမှာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထို ချစ်စရာတောင်လေးကတော့...
Updated: 2016-08-29 13:00
パノラマパーク西原台 ပါနိုရာမ ဥယဉ် နိရှိ ဟာရ ဒိုင်
●New release　2015/7/24 ပါနိုရာမ ဥယဉ် နိရှိဟာရ ဒိုင် တောင် ကုန် ထိပ် သွား လာ ချင်း ကို တားမြစ် ထား တဲ့ အသိပေး စာ ပါနိုရာမ ဥယဉ် တောင် ကုန်း ထိပ် ကို ဆက် ထားပေး တဲ့ လမ်း နဲ့ ပက် သက် ပြီး တော့ တောင်ပေါ်...
Updated: 2016-08-01 13:17
တာဒဲ ၀ါရ wetland ( ချော်ရည် ကြောင့် သဘာဝအလျောက်ဖြစ်ပေါ်လာသော မြေ)
အာစိုး ခုဂျူး အမျိုးသားပန်းခြံအတွင်းမှာ တည်ရှိပြီး ( wetland ) စိုစွတ်သောမြေ တွေ ထဲမှာ မှ အထူး သဖြင့် နာမည် ကြီး တဲ့ ဒေသတစ်ခု ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၅ ခု နှစ် မှာ ဘိုးကစွတ်ရု နဲ့ အတူတူ ခရိုင်...
Updated: 2016-07-26 14:30
JR ခုမမိုတို ဘူ တာ ရဲ့ မြောက် ဖက် မှာ ရှိ ပြီး အမြင့် ၁၃၃ မီတာ ရှိ တဲ့ တောင် ဖြစ်ပါတယ်။ ခုမမိုတို မှာ အကောင်း ဆုံး ညပိုင်း အလှ ကို ကြည့် ရှု နိုင်တယ် ဆို ပြီး နာ မည် ကြီး တဲ့ နေရာ တစ် ခု ပဲ...
Updated: 2016-07-08 09:33
ဟကိုးနဲ အိုဝခုဒါနိ မီးတောင် ပွက် တောင် ( ခါနဂ၀ ဂျပန် )
အိုခုဝဒါနီ ဟာ ၊ခါနဂ၀ ခရိုင် ဟကိုးနဲ မြို့ မှာ ၇ှိ တဲ့ ဟကိုးနဲ မီးတောင် ရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နေရာ တစ် ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဟကိုးနဲ မီးတောင် ရဲ့ ဗဟို တောင် ထိပ် ဖြစ်တဲ့ ခန်းမူရိ တောင် ထိပ် အ...
သဘာဝရှုခင်း သတင်းအချက်အလက်များပင်လယ်ကမ်းခြေ၊ ကျွန်းဆွယ်၊ အငူများတောင်များ၊ ကုန်းပြေမြင့်များ
Updated: 2016-06-28 15:07
မိဆဲန်း ဟိရိုရှိမား ဂျပန်
အိစွတ် ခု ရှိမ ဘုရားကျောင်း ရဲ့ အနောက် ပိုင်း မှာ ထင်ဟပ် နေ တဲ့ မီရာဂျိမား ကျွန်း ဆွယ် ရဲ့ အမြင့် ၅၃၅ မီတာ ရှိ တဲ့ မိဆဲန်း တောင်ပဲဖြစ် ပါတယ်။ ၁၂၀၀ ခုနှစ် အရင် တုန်း က မိဆဲန်း တောင်က ကိုးဘိုး တိုင်း ရ...
Updated: 2016-06-23 15:29
တဲန်းပိုး ဇန်း ဟာပါဘီ(သင်္ဘောဆိပ်ကမ်း) ကျေးရွာ အပန်းဖြေ စရာနေရာ
တဲန်းပိုး ဇန် ဆ်ိပ်ကမ်း ကျေး ရွာ ဟာ ဆို ရင် အို ဆာ ကာ မှာ ရှိ တဲ့ အပမ်း ဖြေ စရာ နဲ့ ကစား စရား တို့ က တစ် နေရာ ထဲ မှာ စု စည်း နေပါတယ်။ အထွေထွေသော အဆောက် အအုံ တို့ က တည် ရှိ ပြီး တော့ တစ် နေ့ ကုန် ပျော်...
Updated: 2016-06-21 14:36
အာရရှိ ရာမ ( မုန်တိုင်းတောင် )
အာရရှိ ရာ မ ဟာ လးကြိုက်များ တဲ့ လည်ပတ် ရန် နေရာ တစ် ခုပဲ ဖြစ် ပါတယ်။ ဆာကူရာနဲ့ ဆောင်း ဦး ရှုခင်း တို့ နဲ့ အတူနာမည် ကြီးပါတယ်။ ၀ါတရိစွတ်ခိတံတား ရဲ့ အနောက် ဖက် မှာ ဆိုဘိအဲရု တောင် က တည်ရှိ ပြီး မိဂိဂေ...
Updated: 2016-05-30 13:28
ခုစ ဆဲန်း ရိ ဂါ ဟာမ ရှု မငြီးလွင်ပြင်
မီးခိုးတလူလူ လွင့် နေတဲ့ တောင် ကုန်း လေး ကို ငေးမော ရင်း နဲ့ ရှု မငြီး နိုင် တဲ့ အလှ တွေ ကို ပိုင် ဆိုင် တဲ့ ခုစ ချိစတို မှာ ... လေးထောင့် ပုံ စံ ရှိ တဲ့ မြက် ခင်း လွင် ပြင် ကြီး ထဲ မှာ အဲဘိုးရှိအိုးဒ...